संयोग जंग शाह हिजो कैलाली टिकापुरको डल्फिन महोत्सवको उद्घाटन गरेर नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि उड्नै लागेको बुद्ध एयरको जहाजमा यात्रुहरूले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईविरूद्ध नाराबाजी गरे । बुध्द एयरको साझँको नियमित उडान १ घण्टा ढिलो भयो र जसले गर्दा सबै यात्रीमा असर पुग्यो । केही निडर…
बिकासको नाममा राणा शासन लागुगरे मेयर राणाले
संयोग जंग शाह नेपालगन्जको इतिहास , नेपालगन्जको सान , नेपालगन्जको परिचय त्रिभुवन चोकमा हिजो राती (सोमबार) छापामारको सैलिमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाइ त्रिभुवन चोकको अवशेषहरु भत्काउने कोशिस गर्यो , जुन निन्दनीय छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवल शमशेर राणा , नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष उज्जवल…
बाँके बर्दियाको नाम बेचेर राजनिती गर्नु भन्दा आँट भए कर्णाली प्रदेशमा गाभौ
संयोग जंग शाह बाँके र बर्दियाका जनताको बिकास , पहिचान अनि अस्तित्वको लागि कसले बोल्ने ? यो प्रश्न भन्दा पनि एउटा अहम् विषय बनेको छ । कुरा को उठान र विषयबस्तु प्रदेश र प्रदेश राजधानीको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको छ । अधिकांस बाँके र बर्दियाका जनताको कर्णाली प्रदेशमा मिल्नु पर्ने सेन्टिमेन्ट…
आश्विन २२, २०७४-०५८ साल कार्तिक दोस्रो हप्ताको कुरा । गृह मन्त्रालयको खटनअनुसार आफू कार्यरत विशेष प्रहरी विभागको सहसचिवबाट जनकपुरको सिडिओको लागि सरुवा पूर्जी लिएको थिएँ । दुईचार दिन अघिदेखि धाम्मधुम्म गर्दैआएको मौसम हिंड्ने बेला सिमसिम पानीमा परिनत भइसकेको थियो । लौ राम्रै साइत पर्‍यो भन्ठानेर बाटा लागेको, एयरपोर्टको प्रतीक्षालयमा भित्रिएपछि…
कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि हजारे अभियान
भाद्र ३०, २०७४-वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार अवश्य पीडामा छन् । त्यही पीडामा बसेरपनि मिठा सपना देख्न भने कहिलै छोडेका छैनन्, भुलेका छैनन् । पीडा छ भन्दैमा यसको सबल पक्षहरूलाई कदापि भुल्न मिल्दैन । पीडासँगै हामीले सीप सिकेका छौं । पुँजी बनाएका छौं । अब हामीले सिकेका सीप र पुँजीलाई…
‘ट्याक्सी मिटरमा जान्छ ?’
आश्विन २१, २०७४-सामान्यतया छ घण्टा लाग्छ । गत बिहिबार १२ घण्टाको बस यात्रामा बल्लतल्ल काठमाडौं आइपुगियो पोखराबाट । एसी सुविधासहितको टुरिष्ट बस गोल्डेन ट्राभल्सले एसीको चिसो त पूरा यात्रामा जम्मा आधा घण्टा मात्र चखायो त्यो पनि सबैले झपार्न थालेपछि मात्र । वाइफाइ त कहाा पाउानु । यसै पनि धेरै बसमा…
कस्ता खुट्टा ? दुनियाभर केवल छन् ५ जोर जुत्ता
यदि तपाइँको खुट्टालाई मिल्ने जुत्ता दुनियाभरमा पाइएनन् भने कस्तो होला ? यो दुनियामा एउटी यस्ती युवती बस्छिन् जो वर्षौँदेखि केवल ५ जोर जुत्ताको भरमा जिवन गुजारिरहेकी छिन् । अमेरिकाको वारचेस्टर सहरमा बस्ने एम्मा चाहिलको उमेर १९ वर्षको छ । उनी अक्सफोर्ड ब्रुक्स विश्वविद्यालयकी छात्रा हुन् र उनी ५ फिट ५…
संविधानका बुझिनसक्नु समस्या
संविधान मूलतः राष्ट्रिय एकताको सुत्र हुनुपर्ने हो । संविधान मानिस, नागरिक, व्यक्ति र जनता केन्द्रित भई बन्नुपर्ने हो। अमेरिकीहरूले संविधान बनाउदा आफ्ना नागरिकलाई कित्ता कित्तामा बाँडेको देखिँदैन। जबकि सन् १९६९ सम्म पनि अमेरिकामा कानुनीरुपमा रङ्ग भेद कायम थियो। सोही वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी संविधान रतन्धो (कलर ब्लाइन्ड ) भनेपछि समानताको वास्तविक…